Michael P. Thijs H. Jos B. usoro ikpe mkpegbu niile na-ebute ngwa ngwa iwebata iwu egwu nke na-emetụta onye ọ bụla: Martin Vrijland
gbara akwụkwọ ANNE FABER, OZI OZI	by Martin Vrijland	na 29 Ka 2019	• 3 Comments
isi iyi: hartvannederland.nl
Ụnyaahụ, anyị hụrụ ọkwa mgbasa ozi banyere ikpe Anne Faber, nke "nna Anne" kwuru. N'ezie, ọ bụ arụmụka nke eritere ọmịiko maka mkpochapụ nke ọtụtụ ikike dịka o kwere mee site n'onye dị egwu dị otú ahụ dị ka Michael P. "Nna Anne" dị oke iwe nke na ọ gaghị eche ma ọ bụrụ na Michael P. egbu onwe ya.
M tinyere aha "nna nke Anne Faber" n'igosi ihe ngosi, n'ihi na ọ bụrụ na anyị na-eme ihe n'ebe a, ọ bụrụ na anyị ejiri obi ebere (arụmụka uche) na-eme ka ndụ nke Anne gbagọrọ agbagọ site na usoro dị njọ, Anne Faber adịghị adị na ya nna onye omee (dika nne, nwanne nna, enyi, wdg). Anyị apụghị ọbụna ikwu eziokwu na 100% ma okwu dị otú a n'ụlọikpe bụ okwu n'eme ikpe ma ọ bụ na anyị na-ele ihe nkiri ANP John de Mol na ihe omimi.
Njirimara nke teknụzụ dị omimi bụ na ị nwere ike ịmepụta mmadụ site na ncha site na AI (artificial intelligent) software. Ị nwere ike tinye otu akụkọ ihe mere eme, gụnyere photos na vidiyo. Nke a dị mfe ugbu a na ngwanrọ taa na e nwere ugbua ngwa ahia na ahịa na-eji akụkụ nke nkà na ụzụ dị na ngwa ọdịnala.
Dịka ọmụmaatụ, ị nwere ike ijide onye na-eme ihe nkiri ma jupụta na olu na ihu onye ọzọ (ma ọ bụ nke miri emi) na vidio vidio. Ọ dịghị onye ga-ahụ ihe dị iche. Ị nwere ike ime otu ihe ahụ na profaịlụ mgbasa ozi na netwọk ndị enyi ha. Edepụtara profaịlụ, mezue na ndetu enyi, nzaghachi enyi. foto na vidiyo, ị nwere ike iji ya ndị agha ndị na-enyocha niile mgbasa ozi mgbasa ozi ọha na eze. Ndị a bụ "ndị" anyị na-ahụ na-apụta na mkparịta ụka na Facebook na forums. Ndị na-asị na ha maara onye a mara ma ọ bụ mara onye maara onye ahụ nke ọma ma ọ bụ na ọ nọ n'ebe ahụ na klaasị; etcetera. Nke ahụ bụ usuu ndị agha nke nwere nyochaa PsyOps n'ịntanetị na mkparịta ụka.
N'akpo okwu mgbasaozi nke taa, anyị na-ahụ site na mmalite na a na-eche ha ka ha kpọọ ndị mmadụ n'ụzọ dị otú a ka ha nakweere iwu ọhụrụ nke ha na-agaghị anabata. Na isiokwu a Ana m akọwa ya n'ụzọ zuru ezu (gụnyere nkọwa gbasara omimi).
N'okwu ndị a nile nke Anne Faber, Nicky Verstappen, Michael Panhuis, Thijs H., Jos Brech (ma ọ bụ aha ọ bụla a na-edeba aha gị na ebe nchekwa gị), anyị na-ahụ mgbe niile na ọ na-eduga n'iwu ọhụrụ na onye ọ bụla na-enweghị ikpe ikpe ọchụ ndị a mmetụta dị ukwuu. N'okwu ahụ a kpọtụrụ aha (pịa njikọ ahụ) M kọwaara gị otú e si akọwa PsyOp Nsogbu, Ngwọta, Ngwọta tinye aka n'ime iwu ọhụrụ. M na-egosi otú ị ga-esi mee ka nwata nwee ike ịchọta otu PsyOp na ngwa ọrụ ugbu a. Ị mepụtara, dị ka a pụrụ isi kwuo ya, nsogbu nke onwe-kere (ikpe mkpegbu nke mmetụta dị ukwuu), ị na-egwu ndị mmadụ n'ọtụtụ dị ukwuu site na mgbasa ozi na mmetụta ha, nke mere na ha dị njikere ịbanye na njedebe ikpeazụ; ndị ha nabatara iwu egwu ahụ nke onwe ha nwere ike imetụ aka.
Usoro ikpe Thijs H. ga-eduga nhichapụ nke nzuzo nzuzo na ụlọ ọrụ ebe ndị mmadụ nọ maka "nlekọta ahụike uche", n'ihi na Thijs H. ekwetaghị igbu ọchụ, ma rutere na aka aka na uwe na GGZ ụlọ ọrụ Vijverdal na Heerlen. Ya mere enwere ihe akaebe, ma nke ahụ dị n'ụdị nkwupụta nke Thijs H. na onye ọkachamara na-ahụ maka ụbụrụ na anaghị enye ya ohere ikwu ihe ọ bụla. N'okwu a, o yiri ka ọ bụ ihe siri ike nke e ji ụma kee nke na-enweghị ike ịkatọ Thijs H. ma ọ bụrụ na onye isi mgbatị ahụ adịghị agbagha ọrụ nzuzo ya. Nke ahụ bụ ihe Onye Okike kwesịrị ịkpata: mkpochapụ nke nzuzo nzuzo. Ikpe nke Thijs H. ga-enyekwa aka hụ na ndị mmadụ na-enwe mmetụta nke mgbagwoju anya nwere ike ịchọta maka ịchọpụta n'enweghị ihe kpatara ya na n'enweghị enyemaka onye ọkachamara (ọkachamara Edith Schippers ụgwọ).
Anne Faber - ikpe Michael P. ga-eduga na ịnakwere iwu banyere ikpe ikpe na-agbasaghị TBS na-enweghị onye na-enyo enyo na-achọ ijikọ aka na nnyocha nyocha psychiatric. Okwesịrị iduga ná ndokwa nke ndụ (TBS) na ikekwe ma ọ bụ iwepu ikike nke ịrịọ arịrịọ. Ọchịchọ maka mkpochapụ nke ikike ahụ zoro ezo na nkwupụta mmetụta uche nke a na-akpọ Anne Faber enyi (Nathan Fidder). Onye ọka iwu ya kwuru okwu.
Ihe gbasara Jos Brech mere ka ọ bụrụ na DNA na-eji ya eme ihe, nke mere ka DNA nweta ihe dị iche karịa nke a na-achọ onye ahụ a na-enyo enyo. N'ezie, ọ bụ iwebata ikike iji nweta DNA na-ejighị n'aka na iji ya eme ihe n'ụzọ iwu na-akwadoghị. Tụkwasị na nke ahụ, a na-eme ka ndị mmadụ na-abanyekwu na ọnọdụ nnabata maka okike nke nchekwa data DNA National (lee lee nkọwa a).
In ihe e kwuru n'elu, nke m na-enye nkọwa zuru oke banyere ihe e dere ederede miri emi, m kọwakwara na ANP (General Dutch Press Office) dị n'aka onye na-emepụta telivishọn. Anyị na-ekwu okwu banyere otu onye otu narị nde mmadụ na Billaire Mol. Ya mere, o kwesịghị iju gị anya na mgbe ị na-ahụ ihe oyiyi na mgbasa ozi, ihe ndị a bụ nanị ihe nkiri. Ọ dị ngwa ma dị mfe ịmepụta na ngwanrọ na usoro ụlọ ọrụ. Onye na - ekiri anaghị ahụ nke a ma na - eche na ọ ga - ele ezigbo ozi. Nke ahụ bụ ihe ị na-eme na arụmọrụ nke ọma. Ka ọ dị ugbu a, otu mgbasa ozi ahụ kwenyesiri ike na ozi ndị na-adịghị ọcha na ndị agha ndị agha na-abịa site na Russia, ya mere onye ọ bụla na-atụkwasịkwa mgbasa ozi ahụ ọzọ.
Otú ọ dị, o kwere omume na Anne Faber adịghị adị, ma ọ bụ mmepụta miri emi.
Ihe ndekọ njikọ njikọ: nu.nl, 1limburg.nl
Michael P. Anne Faber psyop 'Nsogbu Ngwọta Ngwọta' nyekwuo ndị uweojii na ikike ole na ole
Julie van Espen, Onye Belgium Belgium Anne Faber na onye ogbugbu bụ Steve B. onye Belgium Michael P. na PsyOp kachasị ọhụrụ?
Anne Faber na-eburu ya mbụ, e mesịakwa kpochapụ ya, na-eli ya na mberede. Njehie nna Wim Faber?
Tags: Anne, miri miri, deepfakes, Faber, Tinye, ịrịọ arịrịọ, Michael, Netan, P., Ụlọ ụlọ, tbs, vader, enyi
30 May 2019 na 09: 08
Hey John de Mol! Ọ bụrụ na anyị emesịa biri na ụlọ mkpọrọ agbụ dị elu, na nnwere onwe na-egbochi iwu, ebe ndị mmadụ na-enweghị ebere nwere ike ịla n'iyi n'ime haịg na ụmụ anyị niile bụ transgender, ànyị ga-abịa ma chụpụ gị n'obodo ukwu gị?
5 June 2019 na 12: 27
Die Gorsse Lüge: na-ekwusi okwu ụgha ma onye ọ bụla ga-ekwere ya.
Ya mere, ndị ọkà mmụta ọgwụ PsyOp na-agbanye mgbapụ ọhụrụ:
5 June 2019 na 18: 20
Ah, ihe ọ bụla ga-ekwe omume na Madurodam. Ihe na-agaghị ekwe omume agaghị ekwe omume.
Dabere na ndị dọkịta na-ahụ anya, ma na-eduzi ...
Kedu onye obi ojoo ha bu.
" Davina Michelle nke na-esote transgender na Eurovision Song Contest? Duncan Laurence na-ahụ na ọ bụ onye omekome!
Ihe egwu egwu nke Marco Borsato na Kuip na Rotterdam! »
Nleta nile: 15.869.370
Patricia van Oosten op Libya gosipụtara mba mba Europe ga-abụ nke mbụ Turkey ga-ebu
Martin Vrijland op Libya gosipụtara mba mba Europe ga-abụ nke mbụ Turkey ga-ebu
SalmonInClick op Usoro mgbochi ụgbọ elu ndị Iran nke butere Boeing 737-800 (ụgbọ elu PS752)?
Riffian op Usoro mgbochi ụgbọ elu ndị Iran nke butere Boeing 737-800 (ụgbọ elu PS752)?